Fumana ezi tattoos ezinkulu ze-owl | Ukuzoba
Los I tattoo yesikhova yinto esetyenziswa ngokubanzi, kuba ezi zilwanyana zifanekisela ngaphezu kwabo bonke ubulumko, inzolo kunye necala lasebusuku. Izikhova ziintaka ezintle kakhulu ezisithimba ngamehlo azo amakhulu kunye neentsiba ezintle, ngoko ke ayothusi into yokuba zisetyenziswa kakhulu kwiitattoos ezahlukeneyo.
Iitvato ze-Owl zithandwa kakhulu kangangokuba sinako zifumane kwizitayile ezahlukeneyo kunye nemibono eyahluke kakhulu. Ke masibone ezinye zazo ukuze ufumane ukuphefumlelwa kwaye mhlawumbi wenze itattoo entle yesikhova.
1 Iitatto kwisitayile esidala sesikolo
2 Uhlobo olusebenzayo
3 Izikhova ezinemilo yejiyometri
4 Umbala omncinci
5 Izikhova ezihlekisayo
Iitatto kwisitayile esidala sesikolo
A wonke umntu uyalithanda ithala lesikolo esidala, ayiphumi ngohlobo kwaye isinika imizobo eneemilo ezichaziweyo kunye nemibala exabisekileyo. Ke apha sinezindululo ezimbini zezikhova kule ndlela. Awungekhe uphuthelwe zi-shades ezinje ngobomvu okanye mthubi.
Nangona sisitayile ekungenguye wonke umntu owaziyo ukuba masenze njani yiyo loo nto kufuneka ujonge kakuhle kumzobi onezakhono zokwenyani kuye, ukuba uyaphumelela, uya kufumana iitatoo ezintle kakhulu. Ezi zikhova zimbini zinamehlo abonakala ngathi aphuma kumvambo, ngaphandle kwamathandabuzo kwinqanaba lokuqwalaselwa kuzo zombini. Kodwa ubunyani bazo zonke iinkcukacha esizithandayo.
Izikhova ezinemilo yejiyometri
Las Iimilo zejiyometri zisetyenziswa kwiitattoos ezininzi, kuba ngazo phantse nayiphi na imilo ifezekisiwe. Apha sinezikhova ezithile ezinokuthinta ubuhlanga ngazo zonke ezo nkcukacha kunye nemilo yeetoni ezimnyama. Ngokuqinisekileyo umbono olungileyo we tattoo entle.
Banxiba iitattoo ezimibalabala, Sibona ezinye ezinje. Njengoko beziphelile iitoni, ngokuqinisekileyo baya kufuna ukuchukunyiswa ngaphezulu kwexesha, kodwa ubuhle babo abungathandabuzeki.
Ezi Izikhova zinendawo emnandi kwaye ziitattoos ezincinci. Ukuba uyazithanda ezi zilwanyana kwaye ufuna ukunika enye into, nantsi imizekelo emibini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iitatoo » Iitato ze-Owl ngeendlela ezahlukeneyo